Waimea Valley dia nanambara tsiambaratelo nafenina tao ambanin'ny hazavan'ny volana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana US » Waimea Valley dia nanambara tsiambaratelo nafenina tao ambanin'ny hazavan'ny volana
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana US • Kolontsaina • Vaovao farany momba ny Hawaii • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Jolay 11, 2017
Rehefa miposaka ny volana feno ao amin'ny nosy Oahu, ny Hawaii sy ny vahinin'izy ireo dia manao dia manokana mankany amin'ny iray amin'ireo toerana ara-kolontsaina manan-danja indrindra ao amin'ny fanjakana: Waimea Valley. Fantatra amin'ny hoe "fitsangatsanganana amin'ny volana", ireo mpitsidika dia tarihina manerana ny lohasaha rehefa misy tontolo vaovao hiseho eo alohan'izy ireo. Waimea Valley dia harena arkeolojika, misy toerana malaza mahaliana 78.
Waimea, "Ny Lohasahan'ireo Mpisorona," dia nahazo ny anaram-boninahitra teo aminy tamin'ny 1090 tany ho any, rehefa natolotry ny mpanapaka ao Oahu, Kamapuaa, ny tany ho an'i Lono-a-wohi, mpisoronabe. Nanomboka tamin'io fotoana io ka hatramin'ny nifandraisan'ny Tandrefana sy ny fanodinana ny fivavahan'ny teratany Hawaii, dia an'ny kahuna nui (mpisorona avo) an'ny tsipika Paao ny tany. Anisan'ireo rafitra ara-pivavahana natsangan'ny pretra tao amin'ny lohasaha sy ny manodidina ny heiau lehibe miisa 2: Puu o Mahuka, heiau lehibe indrindra any Oahu, miorina eo amin'ny hantsam-bato manatrika ny lohasaha; ary Kupopolo, izay mijoro eo akaikin'ny moron-tsiraka eo amoron'ny renirano Waialua. Ny lohasaha koa dia zaridaina botaniana an'i Edena, manana fanangonana 35 tsy mitovy amin'ny taksi 5,000 eo ho eo manerantany.
Ny sasany amin'ireo zavamaniry tsy fahita firy sy hafakely ao amin'ny Lohasahan'ny Waimea dia mamony amin'ny alina fotsiny. Anisan'izany ireto: 1) Brunfelsia Americana, nantsoina hoe "Lady of the Night" noho ny fofony manitra sy mamy, tsy eo mandritra ny andro, nefa matanjaka amin'ny alina. Misokatra fotsy madio ny voninkazo, avy eo manjavona ho mavo ny andro manaraka. Ny ranomanitra misy azy dia manintona samoina izay manadihady ny tendan'ny voninkazo tubular ho an'ny mamimbony. (2) Cactus ceroid voninkazo mamelana amin'ny alina mamony amin'ny alina (mandritra ny andro koa nefa misokatra bebe kokoa amin'ny alina). (3) Ny hazon'ny alahelo, Nyctanthes Arbor-Tristis "Jasmine voninkazo amin'ny alina" izay eo am-piandohan'ny tetezana voalohany. Amin'ny alina ihany ity voninkazo avy any India ity no mamony. Ny vahoaka mamafa ny voninkazo mbola manitra mbola manitra isa-maraina mba hanamboarana menaka manitra sy loko volomboasary.
Ny lohasaha dia nonina teo anelanelan'ny 930 ka hatramin'ny 1045 talohan'i JK, ary izy io dia mekeka ara-kolontsaina ho an'ny manam-pahaizana amin'ny kanto sy ny fombafombam-pivavahana. Ny mpitari-dàlana an-dohasaha dia manandrana mampitovy ny zavatra niainana moonwalk tamin'ny zavatra mitovy amin'ny mandeha an-tongotra na dia efa alina be aza ny tranon'ny raibe sy renibe. Ny botanista Duke dia nitarika ireo vahiny namakivaky ireo zaridaina manerantany, nanondro ny karazan-kazo maniry maniry amin'ny fotoana mahamety azy, ireo izay tsy mampiseho ny famirapiratany feno amin'ny ora antoandro.
Ny fitsidihan'ny hazavan'ny volana dia natao tao amin'ny "Hua", ny dingana voalohany amin'ny dingana efatra volana. Ny dingan'ny volana Hawaii dia: Hua (voankazo, atody), Atua (andriamanitra; alina voalohany feno), Hoku ("Volana mihantona"), ary Māhealani ("hazy, toy ny hazavan'ny volana"). Ny volana Hua dia rehefa namboly voa sy voankazo ny Hawaii; alina ihany koa io ho an'ny jono, satria ny fitsangantsanganana an-dranomasina tamin'ny gravitational koa dia nitondra fiainana an-dranomasina be dia be niaraka taminy. Na dia niseho mazava aza ny volana dia nanam-bintana izahay tamin'ny alàlan'ny alina feno kintana sy feno kintana ary feno kintana ny fitsidihana nataonay.
Kaila Alva, mpanabe mpitarika ao amin'ny Lohasaha, dia nanome fampahafantarana tsara momba ny hetsika hariva; izy koa dia iray tamin'ireo mpihira roa ho an'ny hariva. Nizara izy hoe: “Rehefa mamakivaky ny lohasaha izahay dia manandrana mitazona ny sain'ny saina fa ity faritra ity dia tena miavaka sy masina ho an'ny olona Hawaii, noho izany dia ataonay antoka fa mandeha am-panajana sy am-pilaminana izahay. Rehefa mamakivaky isika dia manandrana mijery izay miseho eny amin'ny lanitra amin'ny alina, mifantoka amin'ny kintana sy antokon-kintana manokana ary mijery ny fizaran'ny volana. Ny diabe dia mifatotra mankamin'ny volana fenomanana, na dia tsy dia marina tsara amin'ny takariva feno volana aza ny diany. ”
"David, ilay botanista mpitarika antsika, dia mamakivaky ny fanangonana betsaka mandritra ny andro, ary maka zavamaniry fantany fa hamelana amin'ny alina, ka azony antoka fa hanondro azy ireo amin'ny vahiny amin'ny fitsangatsanganana izy ireo," hoy i Alva. “Manana 1,875 hektara isika ao amin'ity lohasaha ity, ary izy io dia iray amin'ireo ahupua`a (sehatra ara-jeografika) tsy misy farany ao Oahu. Misy tempoly 5 ao an-dohasaha: Pu'u o Mahuka Heiau dia miorina eo amin'ny toerana manan-tantara an'ny Pu'u o Mahuka Heiau ary toerana heiau (toerana fivavahana) lehibe indrindra ao amin'ny nosy, manodidina ny 2 hektara. Manatrika an'i Bay Waimea, ny heiau dia miorina 300 metatra ambonin'ny ranomasina eo amin'ny tampon'ny havoana avo. Pu'u o Mahuka Heiau dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny rafitra ara-pinoana, ara-tsosialy ary ara-politika ao amin'ny Lohasahan'ny Waimea, izay ivon-toerana ara-kolontsaina lehibe ho an'ny morontsiraka avaratr'i Oahu tamin'ny androny. ”
“Ity lohasaha ity dia nitoviana tamin'ny tranon'ny fahalalana nandritra ny tantarany. Olona tena manokana nonina teto; ny kahuna (lehilahy hendry na shaman) ary kahuna nui (mpisorona avo) dia nalaza noho izy nipetraka teto, ”hoy i Alva. “Fonenan'ireo mpisoronabe izay nanompo ny mpanjaka nanjaka tamin'ny nosy. Malalaka ny olona ho tonga sy handeha rehefa monina eto, raha mbola mankatoa ny lalàna tamin'izany. Noheverina ho toerana misy ny fahalalana izany; mety hoheverinao ho toy ny tanànan'ny oniversite aza izany. Voafehy mafy ny faritra ambony tamin'izany fotoana izany, noho ny harena voajanahary voafetra, ka olona maro no nonina teny ivelan'ny lohasaha ary tonga rehefa nitady fahalalana na fahazavana ara-pivavahana. Ny diantsika volana dia traikefa ara-kolotsaina, traikefa amin'ny fampianarana. Ataontsika izany mandritra ny fotoam-pahavaratra 'misy antsika. ”
Ho antsika any amin'ny tanibe, ny fahavaratra dia vao nanomboka andro vitsivitsy lasa izay, fa ho an'ny Hawaii, ny foto-kevitry ny fahavaratra dia mety ho hatramin'ny volana aprily. Tsy manana vanim-potoana efatra ao Hawaii izy ireo araka ny fantatsika eo amin'ny tanibe.
Rehefa niditra ny lohasaha, ny chanters dia nanonona an'i Oli Kāhea (Kū mai au he Hawai'i) sy Oli Komo (E hea i ke olona). Ampiasaina izy ireo hangataka alalana hiditra amin'ilay tany, hanaiky izany alalana izany, ary handray ireo mpitsidika ny tranokala, miaraka amin'ny fanantenana fa raha mbola miaina ny lohasaha izy ireo dia ho voaro. Izy io dia protokol iray izay natao nandritra ny tantaran'ny Hawaii. "Izahay no manao an'io protokol io izay isa-maraina any amin'ny lohasaha," hoy i Alva "fomba nentim-paharazana angatahana fahazoan-dàlana hiditra amin'ity toerana ity."
Ny Hawaii dia miantso ny tenany hoe Kamaʻaina (“zaza” (kama) amin'ilay tany ('aina)). Ny tany dia mifamatotra amin'ny kolontsaina sy ny fivavahana Hawaii. Ny fivavahana Hawaii tany am-boalohany dia nitovy tamin'ny fivavahana polinezianina hafa satria nifantoka tamin'ny hery voajanahary toy ny fisondrotana, ny lanitra, ary ny volkano, ary ny fiankinan'ny olombelona amin'ny natiora hivelomana. Nanoratra toy izao i Pali Jae Lee mpahay tantara: “Nandritra ireo andro taloha ireo, ny 'fivavahana' tokana dia ny fianakavianana sy ny firaisan-kina amin'ny zava-drehetra. Ny olona dia nifanaraka tamin'ny natiora.
Ny fiheverana ho iray amin'ny tany dia somary hafahafa amin'ny eritreritra andrefana. Ny Genesisy 1:26 dia mivaky hoe: "Ary Andriamanitra nanao hoe: Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika; ary aoka izy hanjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voro-manidina ary ny biby fiompy sy izay rehetra ny tany sy ny zava-mandady rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. ” Raha eritreritra tandrefana dia zavatra hanjakazaka sy hararaotiny ny tany. Mandritra izany fotoana izany dia nilaza koa i Genesis hoe: "Ary vovo-tany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ​​ary nofofoniny fofonaina mahavelona ny vavorony; ary ny olona tonga fanahy velona. " Ka io dia milaza fa ampahany amin'ny tany isika; ny kolontsaina Hawaii dia manantitrantitra izany hevitra izany.
Amin'ny lafiny teknika, ny olombelona dia avy amin'ny vovoka kintana faharoa; Avy amin'ny tany isika. Fantatsika fa ny singa rehetra ao amin'ny vatan'olombelona dia namboarina avy tamin'ny singa noforonin'ny kintana. Tsy azo lavina fa marina ny Hawaii - iray amin'ny tany isika. Ny zava-drehetra eo amin'izao rehetra izao dia hidrôzenina sy hidrôzenina fananganana. Edward Robert Harrison indray mandeha dia nilaza tamim-pitiavana hoe: "Ny hidrogen dia entona maivana ary tsy misy fofona, izay, omena fotoana ampy, dia lasa olona 5."
Ny eritreritra tandrefana dia manasongadina ny halavirantsika sy ny iraka hitrandrahana ny tany, ary io fiheverana io dia toa manimba ny fahasalamantsika tokoa. Dr. Denise Faustman, talen'ny Laboratoara Immunobiology General Hospital Massachusetts, dia miasa amin'ny vaksininy heveriny fa afaka mamadika diabeta karazana 1 maharitra. Ny vaksinina dia namboarina tamin'ny zavamiaina bitika izay avy amin'ny loto tokoa. Iza no ho nahalala? Faustman dia mitazona ny fiakaran'ny aretina autoimmune, ary ny fitomboan'ny tsy fahampian-tsakafo sy ny tsy fahazakana gluten, dia mifamatotra amin'ny tsy fifandraisan'ny olombelona amin'ny loto intsony amin'ny fomba fanaony taloha.
Ny fikambanana mpanara-maso ny lohasaha dia “miorina” amin'ny tany amin'ny ankamaroan'ny zavatra ataony. Na ireo hetsika voadio aza dia mitombina amin'ity iraka ity. Misy toerana miafina antsoina hoe The Proud Peacock, miafina eo ambonin'ny ivon'ny mpitsidika ny lohasahan'i Waimea. Ny toerana tantaram-pitiavana sy ny lanai misy labozia dia tsy mijery ny bozaka lehibe. Izy io dia toeram-pisakafoanana manokana miaraka amin'ny menio fisakafoanana feno. Ny bara vita amin'ny hazo misy azy dia nafarana XNUMX taona lasa izay avy tany Ekosy. Ny hazo rehetra amin'ity toerana ity dia nohafarana tamin'ny fandaniana be, tonga tamin'ny sambo avy any ivelany. Indrisy, tsy toeram-pisakafoanana ho an'ny daholobe ny toerana, fa tsy azo idirana raha tsy rehefa misy hetsika manokana sy karakaraina, toy ny sakafo hariva Moonwalk. Ny toerana dia azo alahatra amin'ny fisakafoanana amin'ny fampakaram-bady na fanangonam-bola mpanao asa soa, toy ny Kokua Foundation (izay manohana ny fanabeazana momba ny tontolo iainana any amin'ireo sekoly sy vondrom-piarahamonina Hawaii).
The Proud Peacock dia karakarain'i Ke Nui Kitchen sy Thomas Naylor LLC. Naylor dia mitovy amin'ny Wolfgang Puck na Emeril Lagasse eo an-toerana. Naylor dia notezaina tao amin'ny orinasa fisakafoanana. Manomboka amin'ny raibeny, ary mitohy amin'ny rainy sy ny dadatoany, ny anarana Naylor dia mitovy dika amin'ny kolotsaina sakafo sy orinasa nanomboka tamin'ny 1924. Naylor dia manana traikefa am-polony taona mahery eo amin'ny sehatry ny sakafo sy ny hetsika manokana. Ao amin'ny North Shore ary mikotrana manerana an'i Oahu, Naylor dia nahazo laza tsara noho ny fahaizany tsara amin'ny serivisy sakafo ary indrindra ny fanoloran-tena ho an'ny mpanjifany. Ke Nui Kitchen dia miezaka ny hanana fahombiazana amin'ny fanomezana lovia mamorona sy kanto novonoina niaraka tamin'ny akora namboarina avy eo an-toerana, sy ny sakafo any an-tsaha. Miaraka amin'ny fitaomana nosy sy isam-paritra, voaomana amin'ny fiheveran'ny KNK antsipirihany, manome traikefa tsy hay hadinoina izy ireo. Ny sakafo atoandro Moonwalk dia mihoatra ny fanantenana rehetra; ny sakafo hariva teo amin'ny lanai dia tantaram-pitiavana sy tsy hay hadinoina. Ny singa rehetra ao anaty menio dia noforonina hatrany am-boalohany. Ny saosy rehetra dia voaomana ao an-dakozia - tsy misy kapoaka, tavoahangy na sakafo mangatsiaka. Laharam-pahamehana ny maharitra. Ke Nui Kitchen dia mampiasa mpanjono eo an-toerana, ary ny akora rehetra dia avy any amin'ny toeram-piompiana manodidina ary mampiasa fomba fanao izay mahomby amin'ny tontolo iainana. Ny ekipan'ny Ke Nui Kitchen dia tena voaofana sy mahay, liana amin'ny sakafo izy ireo ary manohy manatsara ny asa-tanany. Amin'ny teny Hawaii, Ke Nui dia midika hoe "ny lava" na "ny lehibe." Ny vinan'izy ireo dia ny hitondra traikefa maharitra sy lehibe amin'ny hetsika rehetra.
Tamin'ny alin'ny Moonwalk anay, Ke Nui Kitchen dia nampiditra buffet lafo vidy izay nahitana: salady betiravy misy fromazy feta sy voanjo macadamia karamel; vary safrona; steak flank, antonony tsy fahita miaraka amin'ny saosy chimichurri; akoho voakiky crispy miaraka amin'ny haingo salsa sy saosy; Ovy marina Okinawan; atody voadio; bara lilikoi; mofomamy; ary lovia voankazo vaovao. Jennifer, ilay mpitantana, dia nilaza taminay fa ny iray tamin'ireo mpiasany dia nivoaka tamin'io andro io ihany ary nanoty ireo voankazo hanamboarana ireo bara lilikoi. Tokony ho faty ho azy ireo izy ireo! Ny ambiansy sy ny fisafidianana culinary tsy manam-paharoa no mahatonga an'io sakafo tokony hatao io.
Ny tapakila mitambatra ho an'ny Moonwalk sy buffet dia sarobidy tokoa. Izy io dia traikefa tsy mampino, indrindra amin'ny fotoana tsy fahita firy hahita botanika mamelana amin'ny alina.
Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho tsara waimeavalley.net
SARY: Volana feno volana amin'ny Oahu © Marco Airaghi